Karaoke & Club – CEO Business & Management Magazine
M Cube family karaoke
ဆိုင်တည်နေရာ . . . No. 03-07(B), Level3ST.Jonh City Mall ပြည်လမ်းနဲ့ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းထောင့် လမ်းမတော်မြို့နယ် ရန်ကုန်မြို့မှာ တည်ရှိပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်က ၀၉-၃၃၆၀၇၉၉၉ ဖြစ်ပြီးတော့ အင်တာနက်စာမျက်နှာကတော့ M Cube family karaoke လို့ ရိုက်နှိပ်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အပြင် ဆိုင်ခွဲဖြစ်တဲ့ M Cube Waiayandar လို့လည်း ရိုက်နှိပ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန် . . . တနင်္လာနေ့ကနေ ကြာသာပတေးနေ့အထိ နံနက် ၉ နာရီကနေ ည ၁၂ နာရီဖွင့်လှစ်ထားပြီး သောကြာ၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေကိုတော့ နံနက် ၉ နာရီကနေ ည ၂ နာရီအထိ ဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက် […]
Posted On October 20, 2017, By Editorial
လုပ်ငန်းမိတ်ဆက် . . . Voice Industry KTV က Premium Family KTV အမျိုးအစားပါ။ Bar နဲ့ Restaurant လည်း ပါပါတယ်။ KTV မှာ အကောင်းဆုံး Sound System တွေနဲ့ သီချင်းအစုံအလင် ရှိတယ်။ စတင်ခဲ့တဲ့ ခုနှစ်၊ လိပ်စာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ် . . . ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၁၄ ရက်က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ လိပ်စာက Asia Business Center ၊ ၄၈ လမ်းနဲ့ မဟာဗန္ဓုလလမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ဖြစ်ပြီး ဖုန်း ၀၉-၄၅၈၈၈၉၂၉၂ ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက် . . . […]
Posted On August 14, 2017, By Editorial
ဆိုင်တည်နေရာနဲ့ ဆက်သွယ်ရမယ့် ဖုန်းနံပါတ် . . . အမှတ် ၈၅ ဘီ ၊ ပန်းလှိုင်လမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့မှာတည်ရှိပြီး ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ ၀၉ -၄၅၀၆၂၂၆၀၀၊ ၀၉ ၇၇၇၃၃၂၆၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန် . . . မနက် ၁၁ နာရီကနေ ည ၁၁ နာရီအထိ ဖွင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဧည့်သည်ရှိခဲ့ရင် မနက် ၈ နာရီကနေ ည ၁၁ နာရီထိဖွင့်ပါတယ်။ စတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့ နေ့နဲ့ ရည်ရွယ်ချက် . . . ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၂၀ ရက်နေ့က ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါ တယ်။ မိသားစုတွေနေ့ခင်းဘက်မှာ သီချင်းဆိုလို့ရအောင် Family KTV […]
Posted On October 14, 2016, By Editorial
Club Rizzoli ကို အသစ်ပြန်လည်မိတ်ဆက်
Club Rizzoli ကို အသစ်ပြန်လည်မိတ်ဆက်တဲ့ပွဲကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့၊ ည ၉ နာရီကနေ ၁၁ နာရီထိ ရန်ကုန်မြို့၊ နတ်မောက်လမ်းရှိ Chatirum Hotel Royal Lake Yangon ရဲ့ Club Rizzoli မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပွဲကို DJ Bay Tar ၊ Percussionist Junny နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ Latin Dancer Gisbert တို့ရဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေနဲ့အတူ Club ကိုလာရောက်ကြတဲ့ဧည့်သည်တွေနဲ့ စည်စည်ကားကား ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပွဲကို MYANMORE ၊ Johnnie Walker နဲ့ Myanmar Beer […]
Posted On September 13, 2014, By Editorial
Address No. 75, Kyaikkan San Road, Nat Mout Ward, Tarmwe Township Phone No 01 549686, 542682 Open Time Daily 1 PM to2AM အခန်း ၁၆ ခန်းရှိပြီး အခန်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ကာ တစ်နာရီကို ကျပ်တစ်သောင်းဝန်းကျင် ကျသင့်မှာပါ။ သူ့မှာ မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်၊ တရုတ်၊ ထိုင်း၊ ဂျပန်နဲ့ ကိုရီးယားသီချင်းတွေ သီဆိုနိုင်ပါတယ်။
Address No.330, Ahlone Road, Yangon International Hotel Phone No 09 73036433 Open Time Daily 11 am to2am Music Box မှာ အခန်း ၅၀ ရှိပါတယ်။ အခန်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ တစ်နာရီကို ၇၅၀၀ ကျပ်ကနေ ၂၂၀၀၀ ကျပ်အထိ အခန်းခရှိပါတယ်။ မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်၊ တရုတ်နဲ့ ဂျာမန်သီချင်းတွေရှိပါတယ်။
Posted On November 11, 2013, By Editorial